izimoto Modern kungenziwa ifakwe isisetshenziswa ukuthi uzokwenza imoto control inqubo hhayi kuphela lula futhi kuwusizo kakhudlwana, kodwa futhi ephephile. Ngokwesibonelo, abaningi ngokuvamile okwesikhathi yokupaka yimpumelelo usungula engenantambo ezingemuva umbono ikhamera. Namuhla, abakhiqizi ukunikela imiklamo ezahlukene kule divayisi, ngakho zonke womculo imoto uzokwazi ukukhetha okuhle kakhulu ngokwabo.
Ukuhluka nezici emakamelweni
Kufanele ukuthi ikhamera - kungcono kuphela ingxenye encane uhlelo yokupaka emotweni. amadivaysi Modern kungenzeka ehlukile noma ezakhelwe ezingemuva umbono esibukweni qapha. It ingafakwa kusiphequluli ngisho nomsakazo nezinye izakhi eziningi imoto. Ngakho, engenantambo ikhamera esimenza abone into engemuva kufanele kukhethwe ngokuvumelana nezimfuneko ezithile. Ukuze ezinye kungase kubonakale sengathi ukuze kuzuzwe yokupaka lula futhi kuwusizo kakhudlwana futhi kungaba ukubeka imoto ikhamera evamile, kodwa namanje zikhona eziningi imithetho ukuze babonwe:
Amadivayisi eziqhutshwa ngezinye izikhathi ngaphansi kwezimo ezimbi kakhulu uma izinga lokushisa lehla kanye izenzakalo ezihlukahlukene sezulu.
Misa ikhamera like ungakwazi phezu bumper, futhi ukukhanya inambapleti, amadivaysi kuzohluka imiklamo, futhi izici okunamathiselwe.
ikhamera Wireless kufanele kube high, okungukuthi ukudubula ngokunembile, emini nje kuphela kodwa ebusuku.
sici ledivayisi, igibele ngemuva yokuthi umshayeli has ukubona isithombe eqoshiwe esibukweni.
Kumi esiqongweni sezindawo isithombe ngizodabula imigqa yokupaka ezivumela ukubala ibanga kusuka imoto kahle le ndaba.
Wireless imoto ezingemuva umbono ikhamera kumele zikhethwe ngokuvumelana nezimiso eziningana:
Okokuqala, kubalulekile, indlela ukuthi kuyoba ukuhlela;
Okwesibili, kudingeka ukucacisa lapho isithombe azoboniswa;
Okwesithathu, kumelwe ukhethe indlela ongathola isignali isiqophi umshini;
Okwesine, ukucacisa nemingcele lobuchwepheshe zedivayisi (isib-matrix uhlobo, esibukweni isithombe, noma okunye).
Ngakho, indima ebaluleke kunazo zonke udlalwa yi-Design Umqondo. Lokhu kungenxa yokuthi zenziwe yinoma imuphi umshayeli efuna ukuhlomisa izimoto zayo ngangokunokwenzeka ngokuvumelanayo nangokunembile. Ngokuvamile, ikhamera efakwe ngaphandle imoto, isib bumper. A obandayo e, isibonelo, i-window misa, cishe kungenzeki, ngoba kulesi simo ikhamera ibekwe eliphezulu kakhulu, futhi ngoba Ukubuyekeza bekungeke kube yimpumelelo kakhulu.
izici Design: ukubuyekeza
Ngakho, engenantambo ikhamera yesimanje esimenza abone into engemuva It zingaba izinhlobo eziningana:
ikhamera esungulwe, okuyinto igibele esikhundleni ngemuva ipuleti ejwayelekile ukukhanya. Okunjalo idivayisi futhi esikhanyayo, ngaleyo ndlela-ke kuyehluka avulekile ukufakwa lula izimoto ngaphandle umonakalo. Kuyiqiniso ukuthi kukhona lolu hlobo ezibizayo kunamanye analogue, futhi asifanele bonke brand of izimoto.
Thela ikhamera aboshelwe bumper misa, futhi lokhu kudinga imishini ye umgodi. Kuyinto nge ithuluzi lakhe kuzolungiswa ku isiqhebezo noma nut. Idivayisi kuyinto compact, kodwa ukufakwa kwalo kuzodinga imishini imoto, futhi ngeke isikhalazo zonke umshayeli.
Universal engemuva Buka Ikhamera likwazi isakhiwo esilula, ngakho-ke ingafakwa kunoma iyiphi kobuso umshini: kokubili bumper futhi emzimbeni. Namathisela idivayisi kungenzeka esebenzisa ingcina tape noma ngezikulufo. A Ububi kwelinye lawo kuyinto ifomu lizwakale. Futhi uma usebenzisa nezikulufi ngaphandle izimbobo umshini ongakwazi ukuzenza.
Ikhamera ngesimo inambapleti - njengoba isixazululo okudingeka bashintshashintshe ngayo futhi ngokwenza ngoba ungakwazi ukuyifaka kunoma iyiphi imoto. idivayisi njalo is rotary futhi kuhlanganiswe ku Uhlaka isakhiwo, ngakho ngeke lubonakale kwabanye.
Ngakho, inguqulo elikhulu - ukhethe ikhamera ukuba obunganakekile.
Kanjani ukubonisa ulwazi?
Isithombe kungenziwa ukuboniswa qapha, esemgwaqweni bazihlukanisa kudeshibhodi ngezimoto, linamathele ilanga visor noma ezingemuva umbono esibukweni salon. Ngaphezu kwalokho, kukhona izinhlobonhlobo lapho isithombe ibonakala esikrinini itilosi noma i-kuyunithi umshini (kulesi simo kubalulekile ukuba khona isiqophi okokufaka). Ethandwa kakhulu engenantambo umbono ezingemuva ikhamera, ukwengamela, esemgwaqweni ngaphakathi emotweni. Isithombe izodluliselwa ngezindlela ezimbili:
Ngokusebenzisa isiqophi, ezisabalele esuka egumbini kuya salon qapha. Nale isixazululo, isiginali isiqophi ngocansi ngokuphepha futhi uvikelekile ukuphazamiseka. Okuwukuphela ethile - isidingo ukususwa sheathing ngoba kubekwa ikhebula.
indlela okungenazintambo ngaphezulu elula, ngoba ukudluliswa isignali nge amaza omsakazo. Kodwa ibanga salo 15 m kuphela, kuyilapho izinga kungenzeka yimpambaniso kagesi.
uhlelo Optical: yini okufanele siyicabangele?
Wireless umbono ezingemuva ikhamera ngokuvamile akhethiwe ngombono lula ukusebenza kwawo, futhi adambise kokuthenga. Nokho, indima ebalulekile eyadlalwa uhlelo optical. Kuwufanele benaka ezifana nemingcele key njengoba engela umbono,-matrix uhlobo, degree sokukhanyisa, uhlelo umbala, inani TV imigqa, ukukhanya kwe-infrared kanye nezinye. Ngakho, i-engeli wokubuka ikhamera kuthinta kangakanani isikhala ke utawufaka uma ngokudubula. nemingcele elilungile - 120-170 degrees.
Ngokuphathelene matrix, amadivayisi zanamuhla zisebenzisa be-CCD noma CMOS. Esimweni sokuqala, ukuzwela engcono kuboniswa kusihlwa. Kodwa ijubane ngaleyo ndlela ukufunda uphansi. Ukuzwela okusezingeni eliphezulu CMOS imini nobusuku, basuke libhekene speed. Futhi ngentengo, amadivayisi njenge ezishibhile ukhetho lokuqala.
Zonke ekhona ezingemuva umbono ikhamera izimoto namuhla umbala, okuyinto kusiza kakhulu bezibona ulwazi. kudivayisi Ikakhulukazi ezinhle - ikhono ukupenda yokupaka imigqa izithombe. Bavumela ngisho umshayeli ongenakho okuhlangenwe nakho ukuba kahle ukubala ibanga isithiyo park ngokucophelela.
Ngakho, udinga ukukhetha ikhamera ngakwesokudla. Kuphela kulesi simo ngeke kube umhlobiso semoto yakho, futhi ngaphezu yayo abanekhono futhi zisebenza kahle. Namuhla abathengi ikhamera ethandwa Brands Neoline, Spark, Carax, Parkvision, Phantom, okuyinto izindleko iqala ruble 1300 per unit.
Thulile cleaner wezindlu. Thulile cleaner wezindlu "Bosch"
I-Blender submersible - umsizi obaluleke kakhulu kunoma iyiphi inkosikazi